मधुमेह – ताजा समाचार
मधुमेह किन हुन्छ ? भनेर कसैले सोधे, कुनै पनि विज्ञसँग यसको एउटा मात्र जवाफ छैन किनभने निकै धेरै कारणहरुे गर्दा मधुमेह हुन्छ । खासगरी अस्वस्थ्य खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली हुनु मधुमेह रोग हुनुको मुल कारण हो । हामी जीवनयापनका क्रममा कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ । यहाँ हामी त्यस्तै दैनिक जीवनमा गरिने […]
मधुमेह कसरी थाहा पाउने, कसरी बच्ने : वरिष्ठ चिकित्सक डा.अंशुमाली जोशी
कसरी थाहा पाउने -खाना रुचेर पनि तौल घटदै जाने । -पिसाव सामान्य भन्दा धेरै पटक लाग्ने । -मुख सुख्खा हुने, प्यास धेरै लाग्ने । -भोक बढी लाग्ने तर दुव्लाउदै जाने । -कमजोरी हुने र खुट्टाहरु झम्झमाउने । -खुट्टाहरु पोल्ने । -पिसावमा कमिलाहरु देखिने । -घाउहरु छिटो निको नहुने । कसरी बच्ने -हरेक स्वस्थ मानिसले वर्षमा […]
मधुमेहले आँखामा असरः अन्य असरहरु के के छन् ? [पढेर सेयर गर्नुहोला]
काठमाडौं । संसारमा कूल अन्धोपनामध्ये चार दशमलव आठ प्रतिशत मधुमेहकै कारणले हुने गरेको देखिएको छ । समयमै उपचार नगरे मधुमेह रोग र यसबाट विभिन्न असर हुन सक्छन् । डायबेटिक रेटिनेप्याथी मधुमेहको जटिलतामध्ये एक प्रमुख अवस्था हो । मधुमेहले गर्दा आँखाको पर्दा (रेटिना)मा देखिने विभिन्न असरलाई डाइबेटिक रेटिनोपेथी भनिन्छ । मधुमेहको असरले गर्दा शुुरुमा आँखाको पर्दामा […]
संसारभरी मधुमेहलाई निकै ख त र नाक रोग मानिन्छ । आधुनिक जीवनशैली र सुख सुविधाले मानिसहरुको जीवनलाई सजिलो त बनाएको छ तर यसले मधुमेहजस्ता रोगलाई पनि उपहारको रुपमा दिएको छ । यो एक दीर्घरोग हो । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ तर कहिले निको पार्न भने सकिँदैन । गुलियो खानेकुराबाट टाढै रहनुहोस्ः हुन त धेरै मानिसलाई […]